RASMI: Arsenal Oo Si Rasmi Ah Ugu Dhawaaqday Dhamaystirka Difaacii Ay Waqtiga Badan Galisay Ee Kieran Tierney Iyo Lambarka Uu Xidhan Doono.. - Gool24.Net
RASMI: Arsenal Oo Si Rasmi Ah Ugu Dhawaaqday Dhamaystirka Difaacii Ay Waqtiga Badan Galisay Ee Kieran Tierney Iyo Lambarka Uu Xidhan Doono..
Kooxda Arsenal ayaa ugu danbayn si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay dhamaystirtay difaacii ay xagaagan oo dhan doonaysay ee Kieran Tierney kaas oo ay kala soo saxiixatay kooxda horyaalka Scottland ee Celtic.
Kieran Tierney ayaa hadda si rasmi ah u noqday ciyaartoy Arsenal ah kadib markii uu waqti dheer sugayay in uu soo gaadho Emirates Stadium ee xiliyadii ay kooxdiisii hore ee Celtic diidaysay dalabyadii ay Gunners ku doonaysay.
Arsenal ayaa aduunka oo dhan kaga yaabsatay qaabkii xiliga danbe ahayd ee ay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda uga adeegatay wuxuuna hadda Kieran Tierney ku biiray liiska xidigaha ay Gunners soo iibsatay xagaagan.
Arsenal ayaa 25 milyan gini ka soo bixisay difaacan Kieran Tierney wuxuuna si toos ah uga mid noqon doonaa qorshaha Unai Emery ee xili ciyaareedka cusub iyada oo Arsenal hadda diyaar u ah in ay wax badan ka badasho kooxdeedii soo dhibtoonaysay xili ciyaareedyadii la soo dhaafay.
Arsenal ayaa shaacisay in Kieran Tierney uu tijaabada caafimaadka kaga gudbay xarunta tababarka ee London Colney inkasta oo hore loo sheegay in uu Gunners soo gaadhay isaga oo dhaawac qaba balse aanu noqon wax heshiiskan dhibaato ku noqday.
Arsenal ayaa sheegtay in Kieran Tierney uu hadda si toos ah ugu biirayo kooxda uu Unai Emery hogaaminayo taas oo muujinaysa in dhaawicii la sheegayay aanu ahayn mid uu muddo la maqnaan karo.
Tababare Unai Emery oo dareenkiisa ka hadlay markii uu isku hubsaday saxiixa Tierney ayaa yidhi: “Waxaanu ku faraxsanahay in Kieran uu nagu soo biiray. Isagu waa ciyaartoy aad hibo u leh kaas oo sii wadi doona in uu horumar sameeyo.Waxa uu sii kordhiyay doorashooyinkayaga difaac ahaaneed, wanaag ayaan ka rajaynayaa in uu kooxda ku soo biirayo”.
Kieran Tierney ayaa kooxdiisa cusub ee Arsenal u xidhan dooa maaliyada No.3 sida ay Gunners war saxaafadeedka ay heshiiskiisa ugu dhawaaday ku sheegtay.